Torohevitra tsara indrindra amin'ny fitsangatsanganana raha bevohoka ianao | Save A Train
Home > Travel Europe > Torohevitra tsara indrindra amin'ny fitsangatsanganana raha bevohoka ianao
ny Laura Thomas 24/04/2020
(Last Nohavaozina: 29/05/2020)
Ny fitondrana vohoka dia iray amin'ny fotoana mahafinaritra indrindra amin'ny fiainanao. Izany dia, na izany aza, tonga amin'ny fameperana sasany. Indrindra raha mikasa ny hanao dia lavitra ianao raha bevohoka. Ny fitondrana sy ny fananganana zazakely dia mametra ny karazana fitaterana azonao ampiasaina hampiasana azy, indrindra rehefa mitsangatsangana rehefa bevohoka manerantany. Ny olona iray tsy afaka manidina ary be dia be ny fitsangatsanganana raha bevohoka izy mandritra ny volana maromaro, na raha sendra zava-tsarotra ianao. Aza adino ny hampiditra an'izany rehetra izany amin'ny drafitra fitsangatsanganana vohoka. Fomba iray mora indrindra hahatongavana any amin'ny alehanao rehefa mandeha mandritra ny fitondrana vohoka amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. Matetika ireo orinasa mitondra fiaran-dalamby no mikarakara ny vehivavy bevohoka, mahatonga azy io ho iray amin'ny fomba fitaterana malaza indrindra rehefa mandeha mandritra ny fitondrana vohoka ianao.
Train Fitaterana NO Eco-Friendly Way To Travel, Indrindra Rehefa Tmihetsiketsika Mandreraka. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ny Save A Train, Tranonkala tapakila mora indrindra Eto amin'izao tontolo izao.
Alohan'ny hanombohanao ny dianao miaraka amin'ilay zanakao kely, maka fotoana kely hanomanana ny vatanao mandritra ny dia bevohoka. Miezaha hanao fanatanjahan-tena araka izay vitanao, ity no hatao antoka fa ny vatanao dia amin'ny endrika tsara indrindra manodin-dàlana hatramin'ny bisikiletan'ny dia. Ny fitsangatsanganana mandritra ny fitondrana vohoka dia mety hiteraka anao tokoa. Manaova fanazarana fanatanjahana, ary manamafy orina sy ny tongony. Matory amin'ny kompania fitsangatsanganana Matetika kokoa noho ny mahazatra anao, ary mety ilainao ny fahafaha-manao fanampiny mba mahazo aina rehefa mandeha mandritra ny fitondrana vohoka.
Amsterdam mankany London
Paris mankany London
Berlin mankany London
Bruxelles any London
Nandehandeha nandritra ny fitondrana vohoka 1: Hamarino amin'ny dokoteranao
Alohan'ny dia manomboka mandeha mandritra ny fitondrana vohoka ianao, diniho miaraka amin'ny antontan-taratasinao fa nodiovinao tokoa izy. Aza adino ny manazava fa mandeha amin'ny fotoana maha bevohoka ianao lamasinina ary tsy amin'ny rivotra, satria io no tena mety hisy fahasamihafana lehibe amin'ny vokatra. Bevohoka avo lenta ary ireo izay tara amin'ny trimester fahatelo dia mety holavina ny fidirana amin'ny dia mandritra ny fitondrana vohoka, noho izany dia aleo aloha voadio aloha mba tsy ho diso fanantenana. Vantany vao anananao daholo ny mazava, vakio ny bokyo fiaran-dalamby tapakila an-tserasera.
London ho any Paris
Rotterdam mankany Paris
Bruxelles any Paris
Tmihetsiketsika Mandreraka Soso-kevitra 2: Drafitra am-pitandremana
Fantatsika rehetra fa ny hetsika toy ny fampakaram-bady sy ny fety dia tsy tafiditra ao anatin'ny fotoana tokony hisy anao, especially if you are planning on traveling while pregnant. Raha azo atao, na izany aza, andramo antoka fa miaraka amin'ny ampahany mahafinaritra indrindra amin'ny fiterahana ny dianao. Ny trimester voalohany dia matetika voan'ny lozabe, tsy fahampian-tsakafo ary mahatsiaro mahatsiravina tokoa, izay vaovao ratsy rehefa mandeha mandritra ny fitondrana vohoka. Ny trimester fahatelo dia rehefa manomboka mahatsapa kely toy ny trozona, ary mijoro mandritra ny fotoana rehetra dia mahatonga ny tongotra tsy hianjera. Asio tadio boribory, ny tsy fahampian-torimaso, ary ny fihodinan'ny zaza tsy mitsaha-mitombo ao anatin'izany ary mety hanana fitsangatsanganana tsy dia mahafinaritra ianao raha mandeha mandritra ny fitondrana vohoka. Ny trimester faharoa dia matetika no fotoana tsara indrindra hahatongavana ny dianao. Mbola tsy lehibe loatra ianao, ary amin'ny ankamaroan'ny tranga, lozisialy. Ny fitsangatsanganana raha bevohoka dia atao tsara indrindra raha toa ka tsy mandany ny fotoana rehetra ianao te hanipy, na mandry!
Milan ho any Roma
Florence ho any Roma
Pisa mankany Roma
Naples ho any Roma
Nandehandeha nandritra ny fitondrana vohoka 3: Ento ny vantotranao
Ny fahazoana aina rehefa mandeha mandritra ny fitondrana vohoka dia tsy mora. Marina indrindra izany raha somary tara kely bevohoka indray. Ataovy azo antoka fa manangona takelaka tianao indrindra amin'ny dia. Ny fanananao ondana irery dia tsy hiantoka fampiononana fotsiny rehefa mandeha mandritra ny fitondrana vohoka, nefa homeny anao koa ny fahaizanao manampy anao hahatsapa ho tsy tohizana loatra. Ny dia rehefa bevohoka dia afaka manao lamosina, vozony, ary tena sahirana avokoa ny faritra rehetra ao aminareo. Aleo atrehana, tsara mihitsy na inona na inona mety ho sorena rehefa bevohoka, ka andramo foana Ataovy mora araka izay azo atao ny zavatra rehefa mandeha mandritra ny fitondrana vohoka.
Milan a Venice
Bologna mankany Venice
Roma mankany Venice
Tmihetsiketsika Mandreraka Soso-kevitra 4: Ataovy foana ny latabatrao-potoana
Ny fitsangatsanganana raha bevohoka matetika dia misy fahatarana maro tsy ampoizina. Tsy fantatrao izay ho tsapanao amin'ny maraina ny dia, na raha ny vatanao mila fotoana kely rehefa mandeha mandritra ny fitondrana vohoka. Miady saina kokoa ny zava-drehetra, ary ny iray dia afaka mihazakazaka tara. Manaova sarina latabatra alohan'ny fotoana alohan'ny dianao amin'ny lamasinina, ary ho azonao antoka fa manampy fotoana fanampiny betsaka araka izay azo atao. Tanjona ny ho ampy maraina fahatarana toy ny fifamoivoizana na zavatra hafa rehetra tsy hiteraka anao ho maika ny fitsangatsanganana rehefa mandeha mandritra ny fitondrana vohoka. Azo antoka, ny mipetraka eo am-piandrasana ny fiaran-dalanao no mety ho fanaintainana, fa tsara kokoa noho ny maimaika, mandritra ny fitondrana vohoka, hisambotra azy.
Salzburg mankany Vienna
Munich mankany Vienna
Graz mankany Vienna
Prague mankany Vienna
Nandehandeha nandritra ny fitondrana vohoka 5: Aza matoky ny sakafa nohanina
Ny zavatra isan-karazany dia afaka mamily ny kibonao rehefa bevohoka ianao. Tsy marihina fa misy lisitra raha mbola ny sandrinao amin'ny zavatra tsy tokony hohaninao. Mitondra ny sakafonao miaraka aminao amin'ny ampahany amin'ny drafitra fitsangatsanganana dia hanaratsy ny ankamaroan'ireo olana ireo raha mandeha mandritra ny fitondrana vohoka. Rehefa manangona ny sakafonao ianao, fantatrao tsara hoe inona avy no ao, ary izay mbola ho avy. Ataovy azo antoka fa amboary ao anaty boaty mangatsiatsiaka na fonosana insulated hafa izy io raha tiana na hangatsiaka rehefa mandeha mandritra ny fitondrana vohoka.
Nuremberg mankany Prague
Munich mankany Prague
Berlin a Prague
Vienna mankany Prague
Tmihetsiketsika Mandreraka Soso-kevitra 6: Hamarino telo ny fanafody ataonao
Izany fahatsapana nilentika izany rehefa tsapanao fa nandao fanafody manan-danja ianao dia zavatra tsy te hitranga amin'ny iray avy amintsika, indrindra rehefa mandeha mandritra ny fitondrana vohoka. Rehefa miandrandra, mety ho fanafody samy hafa amin'ny fiainana andavan'andro ianao. Mety tsy hirotsaka avy eo amin'ny sainao eo no ho eo izy ireo rehefa manao fonosana mandritra ny fitondrana vohoka. Aza adino fotsiny fa tsy triple check fotsiny fa manana fanafody mihoatra ny ampy ho an'ny fandehanana mandritra ny bevohoka nefa mitadiava olon-kafa hizaha azy ireo ho anao koa.
Frankfurt mankany Berlin
Leipzig mankany Berlin
Hanover mankany Berlin
Hamburg mankany Berlin
Nandehandeha raha bevohoka Soso-kevitra 7: Aza atsangano ny entanao!
Matetika izany dia tsy voadinika rehefa mieritreritra ny fandehanana mandritra ny fitondrana vohoka. Matetika isika mitondra kitapo na kitapo fotsiny mba namboarina sy hivoahana. Mavesatra ny kitapo, ka manangana izany raha bevohoka dia tsia ny! Mangataha olon-kafa hanome tanana aminao raha azonao atao, raha tsy izany dia manangàna mpiambina iray mba hanampy anao rehefa mandeha mandritra ny fitondrana vohoka.
Tmihetsiketsika Mandreraka Soso-kevitra 8: Aza mandeha irery
Na dia mikasa ny hanao dia irery ianao, try to tie it in with a co-worker or a friend that needs to go to the same place. Traveling while pregnant irery mampitondra loza be aminao. Tsy fantatrao na misy zavatra mety hitranga, noho izany dia mila tarehy tsara tarehy ianao miaraka aminao hanampy anao. Rehefa manapa-kevitra ny drafitra fitsangatsanganana, andramo ny hampiditra farafaharatsiny olona iray izay atokisanao ny dia miaraka aminao.
Nandehandeha raha bevohoka Soso-kevitra 9: Mitondrà mozika vitsivitsy
Ny teboka iray aorian'ny fiomanana rehefa mandeha mandritra ny fitondrana vohoka dia ny mampihena ny adin-tsaina. Ny adin-tsaina dia mety hiteraka voka-dratsiny tsy mahafinaritra sy tsy mahasalama ny vatanao. Aza adino ny mitondra mozika sasantsasany aminao amin'ny lamasininao. Pop amin'ny findainao, ary mipetraha dia miala sasatra rehefa tonga any amin'ny alehanao. Aza adino ny mifoka rivotra.
Soso-kevitra 10: Ampidiro mialoha ny tapakilao
Hamarino fa tsy vitan'ny hoe mametaka ny tapakilanao amin'ny Internet ianao raha mandeha mandritra ny fitondrana vohoka, fa ianao koa dia mahazo ny tapakila fiaran-dalamby mora indrindra miaraka amin'ny Save A Train. Ataovy azo antoka fa manana fiadanan-tsaina ianao momba ny fahazoana tapakila tsara indrindra, ataovy mialoha fa araka izay azo atao, hahazoana ny tapakilan'ny fiaran-dalamby marina dia ilaina amin'ny fananana traikefa tsara rehefa mandeha mandritra ny fitondrana vohoka.
Tsara ny miteraka ary mahafinaritra tokoa indraindray. amin'nySave A Train tianay ny hanampy anao hankafy ny dia, drafitra mialoha, ary esory ny mety hiseho mety hitranga. Tmihetsiketsika raha bevohoka amin'ny lamasinina dia traikefa nahafinaritra toy izany, ary tsy tokony hiova izany satria manantena zazakely ianao!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Torohevitra momba ny fitsangatsanganana raha bevohoka ianao” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/tips-traveling-pregnant/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
europetravel bevohoka Train Travel travelingwhilepregnant TravelPregnant traveltips
Train Tsidika, Train Travel Portiogaly, Train Travel Espaina, Train Travel Turkey
Train Travel Aotrisy, Train Travel Belzika, Train Travel Danemark, Train Travel Alemaina, Train Travel The Netherlands, Travel Europe